HomeChampions LeagueEden Hazard Oo Yasay Awoodda Kooxda PSG
Xiddiga dardarta la soo baxay ee Chelsea, Eden Hazard ayaa yasay, hoosna u dhigay awoodda kooxda PSG oo ay ku kulmi doonaan wareegga rubuc-dhamaadka ee tartanka Horyaalada Yurub, waxaanu barbar-dhigay kooxda Arsenal oo ay toddobaadkan 6-0 ku garaaceen.
Hazard ayaa sheegay in ay kooxdiisu haysato tababare si fiican u yaqaana sida loo waajaho kulamada noocan oo kale ah, wuxuuna ku faanay in kooxdiisu ay haysato difaac aad u adag oo iska caabin kara weeraryahannada PSG.
“Waxaannu haysannaa tababare aqoon u leh sida loo waajaho kulamadan oo kale, waxaa muhiim ah inaanu kala hor tagno difaac adag” ayuu yidhi Hazard oo u warramay telefishanka Canal+, waxaanu intaa ku daray “PSG waxay ciyaaraan kubad aad u qurux badan oo ku dhow ta ay ciyaarto kooxda Arsenal. waxay haystaan khad dhexe oo aad u awood badan, awoodna u leh inuu si fiican u maamulo ciyaarta laakiin waanu awoodnaa inaanu ka badinno, waxaananu haysanaa ciyaartooyo awooda inay kala dhantaalaan”.
Eden Hazard, waxa uu si gaar ah u ammaanay laacibiinta khadka dhexe iyo afka hore ee kooxda PSG, waxaanu yidhi “PSG waxay haysataa laacibiin badan oo aad u fiican sida Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Cabaye iyo Cavani sidoo kale waxay haystaan ciyaartooy aad u fiican oo dhanka difaaca ah”.
Mourinho wuu ku saxsanaa Bedelkii Casillas – Maradona